Health and Medicine | Mgpyinnyar and Win's Wisdom
Health and Medicine, knowledge
December 30, 2016 admin	8 Comments
Water intake for empty stomarch
Is popular in Japan to drink water immediately after waking up every morning. Furthermore, scientific tests have proven its value. Apparently, for old and serious diseases, as well as modern illnesses, the water treatment had been found successful byaJapanese medical society asa100% cure for the following diseases:
သတိ ဥာဏ် ဝိရိယ
credict : U Win Thein
င်ငံသားတို့အတွက် ဘဝနှင့် ဉာဏ်၊ ဝီရိယ ***
✔ ဤဘဝတွင် သောကများကြောင့် ခေတ္တခဏကလေးမျှပင် ရပ်၍ ငေးစိုက်နိုင်လောက်အောင် အချိန်မရလျှင် ဤဘဝသည်ကား ဘာအဓိပ္ပါယ် ရှိတော့မည်နည်း။
(What is the life, if full of care, we have no time to stand stare?)
✔ ဘဝတွင် ရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့ပါကလည်း သင့်စိတ်တို့သည် ဟိုမှသည်မှ မျောချင်ရာ မျောနေသော ပဲ့မပါသည့် လှေနှင့်သာ တူပေလိမ့်မည်။
(Withoutapurpose in life, your mind is likeaship without rudder, drifting hither and thither.)
✔ ဘဝဆိုတာ လှုပ်ရှားရုန်းကန် ကြိုးစားနေခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးလိုချင်သောသူသည် ရေစိုဒဏ်ကိုတော့ ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(Life is nothing butastruggle. Who wants fish must put up withawetting.)
✔ အသက်ရှင်စဉ် ဘဝမှာ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ အမြဲရှိပါတယ်။ (While there is life there is hope.) ဒီနေရာမှာ ဘဝနှင့်ဆန္ဒ (Life and Desire) အကြောင်းကို အနည်းငယ် ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဘဝနှင့်ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျဖို့ကတော့ အတော့်ကို ရှားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးစွာပထမ ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘဝ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကို ဘယ်တော့မှ ရောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးစွာပထမ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ရှိရပါမယ်။ ဒါမှလည်း ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအရ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာ တစ်ပါတည်း ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆန္ဒရဲ့ စေ့ဆော်မှုကြောင့် ကြိုးစားအားထုတ်ကြပြီး ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် ကိုယ်လိုချင်၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကို အနီးစပ်ဆုံး ရောက်ကြရပါတယ်။ ဘဝနှင့်ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်း မကျတာတောင်မှ ကွာဟချက် အနည်းဆုံးဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✔ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ လောကကြီးကလည်း ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ အသိရလည်း ခက်လှပါတယ်။ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် ဖြစ်မလာပါဘူးဟူ၍ ညည်းညူတတ်ကြသည် များကိုလည်း ကြားရတတ်ပါတယ်။ အညစ်အကြေးတရား (၉) ပါး ပေစွန်းနေက ဤလောကကြီးသည် ရှုပ်ထွေးနေမည်သာ၊ အသိရခက်နေမည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ ကျေးဇူးမသိတတ်ခြင်း၊ ငြူစူမနာလိုခြင်း၊ သဝန်တိုခြင်း၊ လှည့်ပတ်ဖြားယောင်းခြင်း၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်ခြင်း၊ လိမ်ညာပြောဆိုခြင်း၊ မတရားလိုချင်ခြင်း၊ မှားသောအယူရှိခြင်း ဆိုတဲ့ လူတို့၏ အညစ်အကြေးတရား (၉) ပါးကို သန့်စင်ဆေးကြောပစ်ခြင်းဖြင့် လောက၏ အရှုပ်အထွေးများ၊ အသိရခက်မှုများ၊ အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
✔ ထိုမှတဖန် လူနတ်ချစ်ရာ အင် (၈) ဖြာ ဖြစ်တဲ့ ချစ်ဖွယ်သာယာ နူးညံ့စွာပြောခြင်း၊ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း၊ သူ့အကျိုးစီးပွားကို လိုလားခြင်း၊ နောက်ကွယ်၌ သူ့အတင်းစကား မပြောခြင်း၊ ကုန်းမချောခြင်း၊ လောကဝတ်ပြု ဖော်ရွေခြင်း၊ အကျင့်သီလရှိခြင်း၊ ပညာရှိခြင်း၊ အမျက်မရှိခြင်း စသည်တို့ကို ကျင့်ကြံခြင်းအားဖြင့် လောကသည် ပကတိ ရှင်းသန့်၍ အခြေအနေကောင်းများ ပေါ်လာမည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေကောင်းများ ရရှိလာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ အောင်နိုင်ခြင်းတရား (၅) ပါး လို့ခေါ်တဲ့ ဒေါသအမျက်ထွက်နေသူကို အမျက်မထွက်သဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊ မကောင်းယုတ်မာသူကို ကောင်းသဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊ စေးနဲဝန်တိုသူကို ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊ မဟုတ်မမှန် ဖောက်ပြန်ချွတ်ယွင်း သစ္စာကင်းသောသူကို မှန်ကန်တော်ဖြောင့်ခြင်းဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊ ခပ်သိမ်းသော အကုသလ ဓမ္မပါပအမှုကို ကုသိုလ်တရားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်းတို့ကို လက်ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် လိုရာ ထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✔ ဉာဏ်၊ ဝီရိယနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သာသနာ့အာဇာနည် အာဒိကမ္မိက ဂုဏ်ထူးဆောင် တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဘဒ္ဒန္တအရှင် ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရားကြီး အကြောင်းကို ကြည်ညိုသဒ္ဓါ ပွားနိုင်ရန်အတွက် ညွှန်းပြလိုပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ တိပိဋကဓရ စာမေးပွဲကြီးမှာ အာဂုံပြန်ပွဲ၊ သဘောရေးဖြေပွဲ နှစ်ခုစလုံးကို ဂုဏ်ထူးနှစ်ဆင့်စီဖြင့် ပထမဆုံး အောင်မြင်တဲ့ မထေရ်ထူးကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ပေါင်း (၃၃) ရက် တိုင်တိုင် ကျင်းပရတဲ့ တိပိဋကဓရ စာမေးပွဲကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆင့်အတန်း အမြင့်ဆုံးနဲ့ အခက်ဆုံးစာမေးပွဲကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ အာဂုံပြန်ပွဲကြီးမှာ သင်ရိုးပိဋကတ်သုံးပုံ စာအုပ်ကြီး အုပ်ရေ (၂၀)၊ စာမျက်နှာပေါင်း (၈၀၂၆) မျက်နှာကို အာဂုံပြန်ဆိုတော်မူရာမှာ အထောက်အမ၊ အကျော်အလွှား၊ အမှားလုံးဝ ကင်းလွတ်သည့်အပြင် ရှင်းလင်းပီသ ပြတ်သားလှ၍ အလွန်သာယာနာပျော်ဖွယ်ရာ ထူးခြားစွာ ပြန်ဆိုတော်မူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ တိပိဋကဓရ စာမေးပွဲကြီးကို အောင်မြင်တော်မူရာမှာ ပိဋကတ်သုံးပုံလုံးကို ပိဋကတ်တိုင်း၊ ပိဋကတ်တိုင်း၌ “ဝိသိဌ” ဂုဏ်ထူး၊ “မဟာ” ဂုဏ်ထူးတို့ဖြင့် ဂုဏ်ထူးနှစ်ဆင့်စီ၊ နှစ်ဆင့်စီ ရခဲ့ပါတယ်။
✔ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဤကဲ့သို့ ပရိယတ္တိ ပညာရေးနယ်ပယ်၌ သူမတူအောင် ထူးထူးချွန်ချွန် ပုဂ္ဂိုလ်မွန်ကြီး ဖြစ်လာရခြင်းမှာ ရှေးပညာပါရမီ၊ ကုသိုလ်ကံအလီလီ ကြောင့်ချည်း မဟုတ်ပါ။ “ကံဟုမူလ၊ သမ္ဗုဒ္ဓတို့ ဟောပြသည်မှာ အရင်းသာရှင့်၊ ဥစ္စာဘောဂ၊ ဇီဝိတိနှင့် သုခပွားရန်၊ ဤလူ့ထံ၌၊ ဉာဏ်ဝီရိယ၊ ပယောဂတည့်” ဟူသော မဃဒေဝလင်္ကာသစ်
Giving birth is alwaysatrying experience for everyone involved. Still, the pressure and anxiety around the event is even more intense when the health of the child is at risk. One extreme example of this was withababy boy four years ago named Noah Wall who was born withasevere birth defect caused by hydrocephalus. Asaresult of the disorder, he came out of his mother’s womb withaswollen head and almost no brain. Before she gave birth, doctors warned Shelly that Noah likely wouldn’t survive long after he was born and that even if he did, his quality of life would be incredibly low. They even advised Shelly to terminate the pregnancy rather than risk havingachild who would either not survive or live the rest of its life in pain.
Still, Shelly wanted to see her child into the world no matter what the risk was. She had faith that things would turn out as they should. As expected, Noah was born with 98% of his brain nonfunctional asaresult of fluid damage from his hydrocephalus. But what happened next wasamiracle. Despite his seemingly irreversible condition, Noah’s brain gradually started to grow itself back. Although his developmental process took longer than withachild without his health issues, he was still able to learn how to talk and at age four hadabrain that was essentially the same as other children his age.
While he still faces extreme health complications asaresult of spina bifida, Noah’s isaone inamillion situation that will be used around the country asateaching case. He will also be the subject ofaBBC documentary about his incredible recovery called The Boy With No Brain. Stories like these remind us not to be cynical and to open our hearts and minds to the possibilities of the world. Though Shelly’s decision to follow through with her pregnancy was an enormous risk, doing so paid off immensely and resulted in an inspirational story for millions around the world—and in grantingalittle boyachance atafull life.